ဘိန်းမဲလို့​ခေါ်​သောဘိန်းစိမ်း — Steemit
yuzana (58) in myanmar • 18 days ago
​ကျောက်​စိမ်း​မှော်​မှာ​တွေရတဲ့ဘိန်းမဲနဲ့ ကျွန်​​တော်​တို့က​လေးမြို့မှာ​တွေ့ရတဲ့ ဘိန်းမဲမတူတာကို​တွေ့ရပါတယ်​ ။က​လေးမြို့မှာ​တွေ့ရတဲ့ဘိန်းမဲက အနာကပ်​တဲ့ဖ​ရောင်းချက်​လိုလိုဆီစိမ်​စက္ကူ​လေးကို မကြီးသီးအနှစ်​က​လေးသုပ်​ထားတာနဲ့တူပါတယ်​။
​ကျောက်​စိမ်း​မှော်​မှာ​တွေ့ရတဲ့ ဘိန်းမဲက အဝတ်​စကို မန်​ကြီးသီးအနှစ်​သုပ်​ထားတာနဲ့တူပါတယ်​​။ကျွန်​​တော်​​တော့ ကားတာလပတ်​အမိုးစလို့ထင်​ပါတယ်​။ သူကတလက်​မကို ဘယ်​​လောက်​ဆိုပြီးဝယ်​ရတာ။ ဘိန်းစားတာက​တော့ရှင်းပါတယ်​။ မကြီးသီးလိုအနှစ်​က​လေးကို ​သေး​သေး​လေး​ကော်​ပြီးပါးစပ်​ထဲမြိုချ ​ရေ​သောက်​လိုက်​တာပါ။ ဘိန်းရှူတာက​တော့ ကထိကယအ​တော်​များပါတယ်​​။ ​တောငှက်​​ပျောပင်​ အညွန့်​​လေးကို လိပ်​ပြီးဓား​လေးနဲ့ပါပါးလှီးပါတယ်​။ လှီးပြီးဖွ့လိုက်​ရင်​ စာဘူး​ဒေါင်းအသိုက်​လို အမြှင်​​လေး​တွေအ​ထွေးလိုက်​ရပါတယ်​။ အဲဒီရတဲ့အမျှင်​​လေး​တွေကို ဒယ်​အိုးထဲထည့်​​အပူ​ပေးပြီး​လှော်​ရပါတယ်​။ ​လှော်​လိုက်​တဲ့အခါ တ​ဖြေး​ဖြေးမီးသင်းပြီးအညို​ရောင်​ အမဲ​ရောင်​ဖြစ်​လာပါတယ်​။ အမဲ​ရောင်​ဖြစ်​လာတဲ့အခါ မီးဖို​ပေါ်မှချကျွမ်း​နေတဲ့ငှက်​​ပျောညွန့်​အ​ထွေးကိုဆယ်​ပြီးအ​အေးခံထားပါတယ်​။အဲ့တာကို ကွမ်း လို့​ခေါ်ပါတယ်​။
တခါဒယ်​အိုးကိုမီးဖို​ပေါ်တင်​ ကိုယ်​ချက်​မဲ့ဘိန်းရဲ့အနဲအများကိုကြည့်​ပြီး ဒယ်​အိုးထဲ​ရေ​လေးနဲနဲထည့်​တည်​ပါတယ်​။​ရေဆူ​ရေပွက်​တဲ့အခါ ဘိန်းအဆီသုတ်​ထား​သောပိတ်​စကိုထည့်​လိုက်​ပါတယ်​ ဆူ​နေ​သော​ရေကအဝတ်​စမှာသုပ်​ထား​သောဘိန်းဆီကိုအရည်​​ပျော်​​စေပြီး ​ရေကနီညို​ရောင်​သန်းလာပါတယ်​။အဝပ်​စမှာ ဘိန်းအဆီမရှိ​လောက်​တဲ့အခါဆယ်​ယူလိုက်​ပါတယ်​။​နောက်​​ရေကိုဆက်​ကြီုတဲ့အခါ တ​ဖြေး​ဖြေးပျစ်​လာခဲ့ပါတယ်​။ ပျစ်​လာတဲ့အခါ ​တော်​​နေကဆယ်​ယူထားတဲ့ ကွမ်းလို့​ခေါ်တဲ့ငှက်​​ပျောညွန့်​ကိုဘိန်းအဆီထဲ ထည့်​လိုက်​ပါတယ်​။ ​နောက်​တူနှစ်​​ချောင်းနဲ့နှံ့​အောင်​​နာနာ​မွှေလိုက်​ပါတယ်​။ အမှန်​က ဘိန်းအဆီးကို ကွန်းလို့​ခေါ်တဲ့ငှက်​​ပျောညွန့်​ကိုသုပ်​လိမ်းတဲ့သ​ဘောပါ။ နှံ့​လောက်​ပြီဆိုဒယ်​ကိုချ ဘိန်းဆီလူး​နေတဲ့ကွမ်း​တွေကို မန်​ကြည်း​စေခန့်​ အလုံးက​လေး​တွေ လုံးပါတယ်​ ။အဲ့တာကို ​မှောထဲမှာခပ်​ပုံလို​ခေါ်ပါတယ်​
​ရောင်းတဲ့အခါတလုံးဘယ်​​လောက်​ဆိုပြီး​ရောင်းတာပါ ။အဲ့ဒီခပ်​ပုံလုံး​လေး​တွေကို ဝါးကြည်​​တောက်​ဒိုဘာဘူး​လေး​တွေနဲ့ရှူကြတာပါ။ အမှန်​က​တော့ ဒိုဘာဘူးဆိုတာ တိုင်းရင်းသား​တွေ ​ဆေးလိပ်​​သောက်​တဲ့ ဝါးကြည်​​တောက်​ဘူးပါ။တရုပ်​​တွေအများဆုံးသုံးပါတယ်​။ သူက​ရေထည့်​ပြီး ကိုယ်​ရှူရှိူက်​တဲ့မီးခိုး​ငွေ့ကို​ရေထဲက​နေဖြတ်​သန်းခိုင်းပြီး ရှူရှူိက်​ကြတဲ့သ​ဘောပင်​ဖြစ်​ပါသည်​။
myanmar travel blog writer heroin
18 days ago by yuzana (58)
sleeplesswhale (39) · 18 days ago
You gota22.22% upvote from @sleeplesswhale courtesy of @yuzana!
asterkame (59) · 18 days ago
yuzana (58) · 18 days ago
uthantzin (55) · 18 days ago
ဘိန်းမဲအကြောင်းကို ဒီလိုလေးတွေ သေသေချာချာ သိရှိစေရန် ရေးသားထားတာ ဗဟုသုတဖြစ်စေပါတယ်အစ်ကို။သိထားသင့်သော အကြောင်းအရာလေးပါပဲခင်ဗျာ။
htwegyi (57) · 18 days ago
မှန်းတာက သူဌေးလောင်း ခပ်ပုံနဲ့တွေ့တော့ အော် ဘဝတော့ပြောင်းသွားတာပ
ansoe (62) · 18 days ago
ဒါတွေလည်း လုပ်ဖူးတယ်လား ဘဘယု ☺
မလုပ်​ဖူးပါဘူးဗျာ ​ဆေးလိပ်​မ​သောက်​တပ်​​တော့ လုပ်​လို့အဆင်​မ​ပြေ
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by gmyanmar from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.
lwanwai (57) · 16 days ago
ခပ်​ပုံ ​လေး ​ပေးပါ 😁😁
minnowhelper (53) · 18 days ago